Fitoniana hiatrehana ny asa amin’izay izao… | NewsMada
Fitoniana hiatrehana ny asa amin’izay izao…
Par Taratra sur 22/12/2018
Mihamazava tsikelikely ihany amin’izao izay ho voafidy ho filohan’ny Repoblika. Tsy maintsy misy mpandresy? Na ny resy… Raha ny tanindrazana iombonana sy mampiombona no jerena ary izay koa no hoe antony handraisana andraikitra, ny safidin’ny vahoaka na ny maro anisa aminy izay tonga nifidy no mandresy. Izay rahateo ny hoe demokrasia? Fanjakan’ny vahoaka, avy amin’ny vahoaka, ho an’ny vahoaka.
Hahay resy ve ny resy raha heverina ho izany? Na hahay mandresy ny mpandresy… Ny an’ireo kandidà ho vita ihany, ho hita eo ihany. Ny an’ireo mpomba sy mpanohana no raharaha be, indrindra izay hoe resy. Sanatria, misy ny be fo rehefa tsy be vato azo? Mitady hanakorontana na mitady izay mety hirika rehetra amin’izany. Mbola mety handairan’izany ve ny hoe maro anisa amin’izao?
Ekena, mety misy ihany ny atosiky ny hambom-po. Nisy ny mety ho nanao teny tsy tsaroana na vava tafahoatra tamin’ireny fampielezan-kevitra ireny? Ny vava no tsy atao be, tsy laitra ny mamerina azy. Eo ny vahoaka sy ny tantara… mitsara. Mety misy koa ny nitompo teny fantatra ho tsy maintsy izao na izatsy ny raharaha? Niara-dalana tamin’izany ny fikendrena sy fanantenana tombontsoa manokana.
Sanatria koa, korontanina na potehina rehefa tsy azo izay kendrena: ho samy tsy misy tompony na samy tsy manana? Zava-doza, raha tonga amin’izany ny mety ho fihevitra sy fihetsiky ny sasany. Ny hamisavisana ny ratsy mba hiavian’ny soa. Nefa ny hamisavisana ny soa, mety hiavian’ny ratsy rehefa tsy araka ny tena zava-misy. Raha ny zava-misy amin’izao, mbola handairan’izany ve ny vahoaka?
Ny vahoaka hatrany no potika amin’ny politika fanakorontanana… ho tohatra fiakarana. Efa be izay hita izay. Hatramin’izao, tsy hita izay mangirana amin’ny fiainam-bahoaka. Ahoana amin’izay? Efa naneho ny safidiny ny maro anisa: mila hajaina, mitaky tamberin’andraikitra… Izay no zava-dehibe sy mahamaika azy amin’izao: ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny ady tany…